Mapato Otsvaga Rutsigiro Pamberi peMusangano Mukuru weSADC
Apo sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC riri kugadzirira musangano waro uri kutarisirwa kuitwa muAngola nemusi weChishanu svondo rino, mapato eZanu PF neMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai ari mushishi kutenderera munyika dziri pasi pesangano iri achitsvaga rutsigiro.
Mapato aya ari kuda kutanga awana rutsigiro pamberi pemusangano weSADC Troika uyo uri kutarisirwa kuitwa nemusi weChina svondo rino, pamberi pemusangano mukuru uchaitwa neChishanu.
Svondo rapera, Zanu PF yakatumira gurukota rinoshandira muhofisi yemutungamiri wenyika, VaSydney Sekeramayi, kuTanzania kunosangana nemutungamiri wenyika iyi, VaJakaya Kikwete.
Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakatumwawo kuZambia pamwe neAngola, ukuwo mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika, VaJohn Nkomo, vakaendawo kuBotswana mukupera kwesvondo, vose vaine chinangwa chekuwana rutsigiro pamusangano weSADC uyu.
MDC-T yakatumawo gurukota muhofisi yemutungamiri wehurumende, uye vari munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato iri, VaJameson Timba, kuti vatendererewo nedunhu reSADC vachitsvagirawo bato ravo rutsigiro.
Bato reZanu PF riri kuda kuti vatungamiri venyika dzemuSADC vatsigire pfungwa yekuti sarudzo dziitwe gore rino, danho riri kurambwa nemapato maviri eMDC.
Mapato aya ari kuda kuti munyika mutange magadziriswa zvose zvinofanirwa kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa zvakaita sekuvandudza mitemo yesarudzo, kurambidza mauto, mapurisa, nevasori kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika inotaura yakazvimirira, VaCharles Mutasa, vaudza Studio7 kuti havaoni zviri kuitwa nemapato maviri aya zvichishanda pamberi pemusangano mukuru weSADC uyu, sezvo chiri kudiwa nevanhu panguva yesarudzo rwuri runyararo chete.
Zvichakadaro, chikwata chenhumwa dzemuyananisi mugakava reZimbabwe uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, chapinda munyika neMuvhuro kuti chinzwe pasvika nyaya yemisaridzirwa mugakava rezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Chikwata ichi chiri kutarisirwa kusangana nevari kumirira mapato ezvematongerwo enyika ari muhurumende yemubatanidzwa munhaurirano dziri kuitwa.